မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်တွေကို အကောင်းဆုံးဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးနိုင်ဖို့…………. | CosmeticMyanmar
Home » Article » မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်တွေကို အကောင်းဆုံးဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးနိုင်ဖို့………….
မိတ်ကပ်ကြိုက်တဲ့ပျိုမဒီလေးတို့ရေ 😆 😆 မိတ်ကပ်လိမ်းရတာကို ခုံမင်နှစ်သက်လို့ နေ့စဉ်မိတ်ကပ်တွေအထပ်ထပ်လိမ်းပြီး စိတ်ရှည်ရှည်ပြင်ဆင်ခြယ်သဖို့ 👩🏻 👩🏻 ဝါသနာထုံတယ်ဆိုရင် မိတ်ကပ်ဖျက်ဖို့ကိုလည်း စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လုပ်ဆောင်သင့်တယ်နော်။ 😎 😎 ခဏတဖြုတ်အတွက်မသိသာပေမယ့် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ Remover နဲ့မိတ်ကပ်မဖျက်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် 🤔 🤔 တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့အညစ်အကြေးတွေစုပြုံလာပြီး မျက်နှာပြင်အသားအရေ ညီညာချောမွေ့မှုတွေပျောက်ဆုံးလာနိုင်ပါတယ်။ 😓 😓 ဒါကြောင့် Cosmetic Myanmar ကနေပျိုမဒီတို့အတွက် နေ့စဉ်မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်သူတိုင်းအသုံးပြုသင့်တဲ့ 🤧 🤧 Palmer’s ကထုတ်ထားတဲ့ Skin Therapy Cleansing Oil လေးအကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ 📣 📣
Water-proof make-up တွေနဲ့ Coverage ကောင်းလွန်းတဲ့ Make-up တွေဟာ 🤔 🤔 သာမန်မျက်နှာသစ်ဆေးအသုံးပြုရုံနဲ့ အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်စင်အောင် မရှင်းလင်းနိုင်ပါဘူး။ 🙅‍♀️ 🙅‍♀️ Skin Therapy Cleansing Oil လေးကတော့တစ်နေ့တာလုံး လိမ်းခြယ်ထားတဲ့မိတ်ကပ်နဲ့ သွားလာရင်းမိတ်ကပ်သားပေါ်မှာ ကပ်ငြိတွယ်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကို 💁‍♀️ 💁‍♀️ သန့်စင်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး အသားအရေကိုကြည်လင်သွားစေပါတယ်။ 😍 😍 Rosehip Oil , Grapeseed Oil , Jojoba Oil တို့နဲ့ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ပျိုမဒီတို့ရဲ့အသားအရေကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ ❌ ❌ မျက်နှာပြင်ပေါ်ကမိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်တွေကို ထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ 🤗 🤗Coco Butter နဲ့ Vitamin-C ကအသားအရေကို ဝင်းလက်ကြည်လင်စေပြီး ချွေးပေါက်တွေပိတ်ဆို့မသွားအောင်လည်း ကူညီပေးပါတယ်။ 🤩 🤩
Eye Make up နဲ့ နှုတ်ခမ်းနီတွေကိုလည်း စိတ်ချလက်ချသန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ 👌🏽 👌🏽 Sulfate , Paraben , Phthalate အစရှိတဲ့ Chemicals များလည်းမပါဝင်တာကြောင့် အပြည့်အဝစိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါတယ်။ 🤝 🤝 အသုံးပြုပုံကတော့ – ခြောက်သွေ့နေတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ဆီနှစ်စက်သုံးစက်ကို လက်ဖြင့်ညင်သာစွာပွတ်လိမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကမိတ်ကပ်တွေကို ဖျက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ မျက်စိမှိတ်ထားပြီးလက်နဲ့ဖြစ်စေ ၊ ဂွမ်းလုံးနဲ့ဖြစ်စေပွတ်လိမ်းပေးပါ။ မိတ်ကပ်အားလုံးပြောင်သွားမှ နှစ်သက်ရာမျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့ဆေးကြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ…ဒီတော့. . Skin Therapy Cleansing Oil လေးကိုသာဆောင်ထားမယ်ဆိုရင် မိတ်ကပ်တွေဘယ်လောက်လိမ်းလိမ်း ၊ Coverage တွေဘယ်လိုပဲလုပ်လုပ် ၊ Eye Make up တွေဘယ်လိုခြယ်သပါစေ အလွယ်တကူဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးနိုင်ပြီး 🙀 🙀 ကြည်လင်ဝင်းပညီညာတဲ့ မျက်နှာအသားအရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာအသေအချာပါပဲနော်။ 😻 😻